Diabetes – Page7– Healthy Life Journal
ဆီးချိုရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါ ဆက်စပ်မှုအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ဆီးချိုရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါက ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုရှိပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေလည်း ရှိပါတယ်။ ဆီးချိုသမားတစ်ယောက်ကို နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါမရှိသော်လည်း ရောဂါရှိတဲ့သူလိုမျိုး ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ အများကြီးရှိပါတယ်လို့ ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုက...
ဆီးချိုရောဂါရှိသူ ဝမ်းလျှော/ဝမ်းပျက်တဲ့အခါ . . .
မေး. ဆီးချိုရောဂါရှင်များ ဝမ်းလျှော/ဝမ်းပျက်ရင် ဓာတ်ဆားရည် သောက်လို့ရမလား ခင်ဗျာ။ Ko Ko (FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ဆီးချိုရောဂါရှိသူ ဝမ်းလျှောတဲ့ပမာဏ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သွေးအချိုဓာတ် ပမာဏပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။...
အင်ဆူလင်ထိုးပြီး အသက်ဆက်ပါ (၁)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး(ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အင်ဆူလင်ထိုးရင် အသက်တိုမယ်၊ သက်တမ်း ကုန်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ဆီးချိုလူနာနဲ့ သူတို့မိသားစုတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးထဲမှာ စွဲနေတတ်တဲ့ အယူအဆတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီယူဆချက်တွေ ကို လေပင့်သလို ပိုဆိုးသွားစေတာကတော့ နားမလည်တဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ အားပေးစကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ ဘယ်အချိန်မှာ လေဖြတ်နိုင်ခြေ များပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ဆီးချိုသက်တမ်းရင့်လာရင် လူနာအများစုက ဆီးချိုထိန်းတာ မကောင်းတတ်ကြတော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဆီးချိုသက်တမ်းရင့်လာတဲ့အခါမှာရော ဆီးချိုကိုထိန်းတာ မကောင်းတဲ့အခါမှာရော လေဖြတ်နိုင်ခြေများတတ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါနဲ့တွဲပြီး သွေးတိုးရောဂါ၊ အဆီများတာတွေ...
တစ်နေ့ ကယ်လိုရီ ၂၀ဝသာရယူပြီး ဆီးချိုရောဂါကို အနိုင်ယူခဲ့သော အမျိုးသမီး
၊ ကိုထက် ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံက အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် မာရေးဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက တစ်နေ့မှာ ကယ်လိုရီ ၂၀ဝ သာ သောက်ပြီး ဆီးချိုကို အနိုင်ရရှိသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မာရေးနဲ့အတူ စမ်းသပ်မှုမှာ လူဦးရေ ၂၉၈ ဦး...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ပျောက်ကင်းနိုင်သလား (၂)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဘာကြောင့် အစားလျှော့ရင် ဆီးချိုသွေးချို ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာ ရှင်းပြလိုပါတယ်။ လူတွေဟာ လိုအပ်တာထက်ပိုစားထားလို့ မသုံးဖြစ်ဘဲ ပိုနေတဲ့ကစီဓာတ်တွေ (Carbohydrate) အာဟာရတွေဟာ အသည်းနဲ့မုန့်ချိုအိပ်တွေမှာ အဆီအဖြစ်နဲ့စုပြီး အဆီဖုံးတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ထရိုင်ဂလစ်ရိုဒ်နဲ့ ဖက်တီးအက်စစ်တွေ (Triglyceride and Fatty...